Olee otú iji weghachi iTunes Library si iPhone 5 / iPhone 4S / iPhone 4
> Resource> iTunes> Olee otú iji weghachi iTunes Ndetuta egwu ọkpụkpọ
"Ọ bụ ezie adịkwa ọhụrụ iTunes listi ọkpụkpọ, m ehichapụ a playlist si iTunes Library mmadụ na mberede. Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ dị mfe iji weghachi iTunes listi ọkpụkpọ? M ọbụna gbalịrị dochie nke ochie iTunes Library.xml na okenye. Otú ọ dị, ka uche na-ehichapụ playlist"
Mgbe emelite listi ọkpụkpọ na iTunes, ị nwere ike ihichapụ iTunes listi ọkpụkpọ accidently. Na nke a, iji weghachi iTunes listi ọkpụkpọ, ozugbo nhọrọ bụ dochie iTunes Library.itl na okenye faịlụ. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị oge, ọ bụrụ na ị kwalite gị iTunes ruo ogologo oge, mgbe ahụ, ọ bụ nnọọ ike ịbụ na-ehichapụ iTunes playlist adịghị adị na iTunes Library.itl mgbe niile. Kama nke iweghachi iTunes listi ọkpụkpọ ịga nke ọma, i nwere ike ida nke ugbu a iTunes Library dị ka mma. M na-ahụ ọtụtụ ndị dị otú ahụ ụdị posts na forums. N'ezie, ị na ike iweghachi iTunes listi ọkpụkpọ site na iPhone, iPod, ma ọ bụ iPad na Wondershare TunesGo.
Download TunesGo free ikpe mbipute!
Wondershare TunesGo-enye gị ohere iji weghachi iTunes listi ọkpụkpọ site na-ebufe ndị a listi ọkpụkpọ site na iPhone, iPod, na iPad ọ bụrụ na ị synced iTunes listi ọkpụkpọ tupu ihichapụ ha. Ndị na-esonụ Ama agwa gị otú ị weghachi iTunes playlist si iOS ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iOS ngwaọrụ na kọmputa
Download na wụnye TunesGo na kọmputa gị. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ nke nwere playlist gị mkpa na PC na ẹkedori TunesGo. TunesGo ga chọpụta gị iOS ngwaọrụ (iPhone, iPod, iPad) na-egosipụta ya na isi na windo na isi Ama. TunesGo ugbu a n'ụzọ zuru ezu na-akwado iPhone 5, iPad Obere, iPod aka, wdg Mụta ọzọ banyere akwado ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 2. Weghachi iTunes playlist si iOS ngwaọrụ
Na n'aka ekpe nke isi window, ị pụrụ ịhụ ihe "Ndetuta egwu ọkpụkpọ". Dị pịa na ndetuta egwu ọkpụkpọ ka ekpughe niile listi ọkpụkpọ na a udi. Chọta na họrọ onye gị mkpa. Pịa triangle n'okpuru "Export ka" na-ahọrọ "Mbupụ na iTunes Library". Na a na-enwe ọganihu mmanya ga-apụta, na-egosipụta otú ọganihu na-aga.
Nke a na-eweghachiri iTunes listi ọkpụkpọ ga-okokụre anya. Na mgbe ahụ ị nwere ike ịga iTunes ka lelee iTunes playlist. Site ndabara, fim na play adabere na-agafere iTunes dị ka mma. Lee, otú mfe ọ bụ iji weghachi iTunes listi ọkpụkpọ site na iOS ngwaọrụ. Ya mere, mgbe ị na-ihichapụ iTunes playlist (s) na-atụghị anya, adịghị mmekọrịta iTunes na gị iOS ngwaọrụ ozugbo. Dị na-eji TunesGo iji weghachi ya.
Olee otú naghachi iTunes n'ọbá akwụkwọ